« Isan-taona » -
AccueilTresaka« Isan-taona »
« Isan-taona »
04/12/2017 admintriatra Tresaka 0
Marobe ireo manome tsiny ny fitondram-panjakana mikasika ny fidangan’ny vidim-bary, na koa ny fidangan’ny entana ilaina andavanandro. Ao ny manome tsiny avy hatrany fa tsy voafehin’ny tompon’andraikitra nankinina tamin’izany io sehatra io. Voalazan’ny minisitry ny Mponina anefa, tamin’ny sabotsy teo fa gaga mihitsy izy nahalala fa raha tokony ho vary no hafaran’ilay mpandraharaha, dia zavatra hafa ahazoana tombom-barotra ambonimbony noho ny vary no tongany eto. Mazava ho azy fa tsy ampy izany ny vary tena tonga eny an-tsena kanefa ny tatitra tonga dia hoe ampy tsara ny vary. Dia tsy mahagaga raha ho tonga amin’io vidiny ambony dia ambony io ny vary, satria raha 10 000 taonina no voalaza fa nafaran’ireo mpandraharaha, kanefa 1 000 taonina fotsiny no vary amin’ireo fa ankoatra izay dia « friperie » na « lamaody », na « pneu occasion », na ranomanitra, na « whisky ».
Tsy afaka amintsika gasy mihitsy ny toe-tsaina tia kely sy ny toe- tsaina « trafika ». Efa nanankinan’ny fanjakana andraikitra manafatra vary izao ny mpandraharaha sasany, dia mbola mahita irika hanaovana izany trafika maizina izany ihany. Volabe tsy toko tsy forohana tokoa mantsy no azo avy amin’ny fanambarana hosoka iray. Raha vary 1 000 taonina no ambara fa ao anatin’ilay kaontenera kanefa tsy misy afa-tsy “alikaola” sy ranomanitra ary kodiarana sy lamaody hiatrehana fety, dia efa azo an-tsaina amin’izany ny tombony avo arivo heny azon’ilay mpandraharaha. Izy mahazo tombony, mahazo miliara, afaka mividy fiara raitra isam-bolana amin’ny fanambarana hosoka eo amin’ny toeran’ny vary, fa ny vahoaka kosa mizaka ny tsy eran’ny aina amin’ny vidim-bary miaka-bidy isan’andro. Tsy mahagaga raha akaiky fety toa izao no miaka-bidy ny vary, satria amin’izao vanim-potoana hitsenana ny Noely sy faran’ny taona izao no mandeha ny bizna whisky sy ranomanitra , ary ny lamaody.
Vao tsy ela akory izay no nahatrarana mpanao fanambarana hosoka amin’io alikaola sy entana hafa io, saingy tsy iny ihany akory no mpandraharaha mahita lala-poza fa maro any ambadika any. Aleo angamba hotapahina hatrany amin’ny fakany mihitsy ity fanabotriana vahoaka sy fanosoram-potaka ny mpitondra ity. Aiza ve ka saika isan-taona izao dia mampiteny ny anarany foana ireo milaza azy ho mpanafatra vary, kanefa zavatra hafa no ampidiriny eto. Hisy “task force” hiarahana amina minisitera maromaro mihitsy moa hiady an’izy io, ka hivaha tsy ho ela araka izany io olan’ny vary io.